WTTC: Yekufambisa & Yekupa mupiro kuCaribbean GDP yakadonhedzwa ne $ 33.9 bhiriyoni muna 2020
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Caribbean » WTTC: Yekufambisa & Yekupa mupiro kuCaribbean GDP yakadonhedzwa ne $ 33.9 bhiriyoni muna 2020
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • Culinary • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • nhau • Resorts • Kutarisirwa • Shopping • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Kufamba & Kushanya kukanganisa kweCaribbean GDP kwakadonha kubva kuUS $ 58.4 bhiriyoni (14.1%) mu2019, kusvika kuUS $ 24.5 bhiriyoni (6.4%), mwedzi gumi nemaviri chete gare gare, muna 12.
COVID-19 inokonzeresa kudonha kunoshamisa kwe58% mupiro wechikamu kuGDP
Mazana matanhatu nemakumi masere emabasa akarasika nemamwe akawanda achiri kurembera pachiyero
Kudzoka kwekushanya kwenyika dzese gore rino kwaigona kuona mupiro weGDP uchikwira zvakanyanya uye mabasa achidzoka
World Travel & Tourism Council yegore negore yeEconomic Impact Report (EIR) nhasi inoratidza kushamisika kwakaita COVID-19 pabazi reCaribbean neTravel & Tourism, ichiparadza madhora zviuru makumi matatu nematatu kubva kuhupfumi hwenharaunda.
EIR yegore negore kubva ku World Kufamba & Yekushanya Kanzuru (WTTC), iyo inomiririra yepasirese Travel & Tourism chikamu chakazvimirira, inoratidza mupiro wedanho kuGDP wakadzikira 58% inoshamisa, yakakwira kupfuura avhareji yepasi rose.
Kufamba & Kushanya mhedzisiro pane iyo GDP yenharaunda yakadonha kubva kuUS $ 58.4 bhiriyoni (14.1%) mu2019, kusvika kuUS $ 24.5 bhiriyoni (6.4%), mwedzi gumi nemaviri chete gare gare, muna 12.
Mwaka wekurambidzwa kwekufamba marambidzo izvo zvakaunza kwakawanda kwekufamba kwenyika kuenda kumugumo, zvakakonzera kurasikirwa kwema 680,000 Ekufamba & Ekushanyirana mabasa munzvimbo inozivikanwa yezororo, zvakaenzana ingangoita kota yemabasa ese ari muchikamu.
Kurasikirwa kwemabasa uku kwakanzwika kwese kwese Kufamba neKushanya ecosystem, nemaSME, ayo anoumba masere kubva mugumi emabhizimusi epasirese ari muchikamu, kunyanya akanganiswa.
Zvakare, seimwe yemapoka akasiyana siyana epasirese, kukanganisa kwevakadzi, vechidiki uye vashoma kwaive kwakakosha.
Huwandu hweavo vanoshandirwa muCaribbean Travel & Tourism chikamu chakaderera kubva pamamiriyoni angangoita 2.76 mu2019, kusvika pamamiriyoni e2.08 muna 2020, donhwe rinosvika kota (24.7%).
Chirevo chakaratidzawo kuti vashanyi vekumba vakashandisa mari yakaderera nezvikamu makumi mana nezvipfumbamwe nezvina muzana, nemari yepasi rose ichitowedzera, ichidonha ne49.6%, nekuda kwekuvimba kwakasimba kwenharaunda parwendo rwekunze, nezvitsuwa zvakawanda zvakakanganiswa.
Ipo nepo wepasi rose avhareji Yekufamba & Yekupa mupiro kuGDP yakaderera ne -49.1%, mazhinji ezvitsuwa mudunhu akawedzera zvakanyanya.